Mobile Webhu Traffic Statistics | Martech Zone
NeChishanu, Gunyana 7, 2012 Adam Mudiki
46% yevagari vemuUS vane yavo smartphone yeimwe mhando. Icho chiitiko chinoshamisa chakapihwa kuti kune vanhu vazhinji pamagumo ega ezera bhero curve. Nharembozha zvakare inzira yekutanga yekuti vanhu vabatanidze pawebhu, kwete yechipiri. Iyo desktop kana laptop haisi newe 24/7 - kunyangwe piritsi iri - asi nharembozha yako. Pakati penyika, huwandu hwevanhu vari kushandisa nharembozha kuwana webhu vakatonyanya. Kune nyika zhinji, ndiyo chete nzira yavo yekuwana.
Mobile Webhu Traffic Statistics inovhara yazvino online mobile traffic manhamba anosanganisira nhare dzekutsvaga injini zvikamu, US M-commerce kutengesa, Mobile Traffic kune Vane 500 E-Vatengesi uye zvimwe zvakawanda.
Pamwe nekuve mudziyo wekutaurirana, nharembozha iri kuve yekubatsira yekutenga nekuda kwekugona kwayo, kuwanikwa kune zvidzikiso nemakuponi, kugona kuita nyore kutsvaga kwechigadzirwa pa… uye nzvimbo yechipiri kune zvitoro zvekutengesa kana mudziyo usiri mudura.
Tags: yepasi rese nharem-commercemcommercemugove wekufambisanharembozha yewebhu trafficdandemutande motokari